मौलिक पहिचानलाई विश्वभर उजार गर्न मिस विश्वकर्मा : बराइली - विभेद बिरुद्ध अभियान
मौलिक पहिचानलाई विश्वभर उजार गर्न मिस विश्वकर्मा : बराइली
बिभेद बिरुद्ध अभियान , भदौ १३ - मिस विश्वकर्मा इन्टरनेश्नल २०१७ काे फाइनल अडिसन भदौ २३ गते कतारकाे राजधानी दाेहामा हुँदैछ। पहिचान, अधिकार र आफूसँग भएको कला क्षमतालार्इ प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले अायाेजित मिस विश्वकर्मा २०१७ काे फाइलन अडिसनका लागि अाठ जना प्रतियाेगी छनाैट भएका छन्। प्रतियाेगिताकाे अायाेजक मोनाली इन्टरटेन्मेन्ट रहेकाे छ।
गत वर्ष पूर्वाञ्चल मिस विश्वकर्मा आयोजना गरिए पनि मिस विश्वकर्मा भने पहिलो पटक अायाेजना भएकाे हाे। मोनाली इन्टरटेनमेन्टका सञ्चालक हुन् गायक दीपक बराइली। मोरङको पथरी, शनीशरे नगरपालिका ८ मा जन्मिएका बरायलीले माध्यमिक र उच्च माध्यमिक सम्मको शिक्षा भागिरथ उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा हासिल गरे। उनले स्नातक तहको अध्ययन दमक बहुमुखी क्याम्पस, झापामा व्यवस्थापन संकायमा पूरा गरे।
उनी सानैदेखि संगीतमा रुचि राख्थे। जसको फलस्वरुप २०६२ सालमा पूर्वाअञ्चल संगीतालयमा जोडिए। त्यसपछि उनले मणीकमल क्षेत्रीसँग संगीत सिके। अहिलेसम्म उनले १० वटा गीत गाइसकेका छन्।
यसै सन्दर्भमा बराइलीसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सारसंक्षेप
– मिस विश्वकर्मा इन्टरनेश्नल २०१७ किन अावश्यक पर्यो?
हाम्रो देश विविध भाषा जातजातीले भरिएको छ। हरेक जातजातीले आआफ्नो भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्धनका लागि यस्ता किसिमका कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्दछन्। मिस विश्वकर्माले विश्वकर्माको समुदायकाे एकताका लागि काम गर्ने छ। हाम्रो समुदायका युवतिमा रहेकाे प्रतिभा प्रष्पाेटन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएकाे हाे।
–मिस विश्वकर्मा इन्टरनेश्नल२०१७ मा कति प्रतियोगि सहभागि थिए?
मिस विश्वकर्मा अन्तराष्ट्रिय हामी पहिलो पटक गर्न लागेका हौं। तर, पनि सहभागीताको भने आशा गरे भन्दा राम्रो नै रह्यो। हाम्रो सूरुमा ३९ जनाले आवेदन दिएका थिए। जुन हाम्रो अडिशन राउण्डबाट बाहिरनु भयो। उहाँहरु कोहि आफ्नो इच्छाले बाहिरएिका थिए भने। कुनै सहभागीहरुको हामीले तोकेको मापदण्डमा नपरेका ले बाहिरीएका थिए।
–मिस विश्वकर्मा इन्टरनेश्नल के कस्ता मापदण्ड बनाउनु भएको थियो?
प्रतियोगीको न्यूनतम योग्यता एसएलसी पास हुनुपर्नेछ। भने उचाइ कम्तिमा पाँच फिट दुई इन्च हुनुपर्नेछ। यो मापदण्डका आधारमा हामीले प्रतिस्प्रर्धी छनोट गरेका थियौं। हामीले नपाल भरीका विश्वकर्मा समुदायका युवती प्रतियोगितामा सहभागी गराएका छौ। विश्वकर्मा समुदायका युवतीहरु शिक्षीत छन। र उनीहरु पनि जुनसुकै प्रतिगोगितामा सहभागी भएर सफल हुन्छन् भन्ने हो।
र सिक्ने कुरा त आफ्नो थर भन्नै अफ्ठ्यारो मान्ने गर्थे। यो प्रतियोगिताबाट नेतृत्व विकास भएकाे छ।
–अरू प्रतियोगिता भन्दा यो प्रतियोगितामा के भिन्नता छ?
मिस विश्वकर्मा पनि अरु सौन्दर्य प्रतियोगlता जस्तै हो। फरक यतिमात्र हो हामीले यो विश्वभरीका समुदायलाई विश्वकर्मा पनि कुनै जातl समुदाय भन्दा फरक छनाैं भन्ने हो। प्रतियोगिता उस्तै हो जसरी अन्य सौन्दर्य हुने गर्दछन्। निर्णायक टाेली हुन्छ।
–प्रतियोगिताको विजेता कसरी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ?
प्रतियोगिताको विजेता एकदमै निस्पक्षताका आधारमा हुन्छ। निर्णायक मन्डल रहेकाे छ। उनीहरुको निर्णय नै अन्त्तिम हुने छ। निर्णायक मन्डलले नै विजेता घोषणा गर्ने छ। मिस विश्वकर्मा २०१७ विजेता ताजसहित स्कूटर हात पार्नेछिन्। विजेतालाई स्कूटरसँगै एअर होस्टेजको प्रशिक्षण निःशुल्क दिइनेछ, भने सौर्य एअर लायन्समा जागिरको ग्यारेन्टी रहनेछ।
साथै, मोनाली इन्टरटेन्टमेन्टले निर्माण गर्ने फिल्ममा अवसर दिइने र शिक्षामा ५० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने बराइलीले बताए। सेकेन्ड रनरलाई ५० हजार र थर्ड रनरलाई ४० हजार नगदसहित अन्य अवसर रहेको छ।
–याे प्रतियोगिताबाट समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ?
–वर्षौदेखिको कुण्ठीत समुदाय यसरी जाग्नु भनेको नै परिवर्तन हो। विकास हो। विश्वकर्मा समुदायलाई कलाको धनी भन्छौ, विश्वकर्मा पूजा पनि गरिन्छ। जसरी विश्वकर्मा समुदायको पूजाका लागि दिन छुटाइएको छ। त्यसरी नै एक दिन सरकारी तहबाट विश्वकर्मा समुदायका लागि विदाको दिन छुट्याउनु पर्छ। र, हाम्रो समाजको जाति व्यवस्था कामको आधारमा छुटाइएको छ।
तर, अब समाज परिवर्तन भइसकेकाे छ। समाज शिक्षित भएकाे छ। अहिले विभेदमा कमी भए पनि अन्त्य भने भइसकेकाे छैन। तसर्थ याे प्रतियाेगिताले विश्वकमर्मा समुदायकाे माैलिकता र उनीहरूमा रहेकाे कलालार्इ झल्काउने छ। यसकाे सन्देश सकारात्मक नै हुनेछ।